Magacyada boqorada maxaysan ugu jirin liiska dadka ugu taajirsan?
Magacyada boqorada maxaysan ugu jirin liiska dadka ugu taajirsan dunida?
Mar walba oo aan ka hadalno dadka ugu taajirsan caalamka magacyada durba maskaxdeenna kusoo dhaca waxaa ka mid ah Jeff Bezos iyo Bill Gates.
Sida ay sheegaan wargeysyada ka faallooda arrimaha ganacsiga, sida Forbes, Jeff Bezos ayaa hadda ah ninka ugu maalqabeensan adduunka.
Xilli kasta oo aan eegno liiska dadka ugu taajirsan dunida ee lasoo geliyo bogagga majalladaha uu ka mid yahay Forbes, waxaa noo muuqda magacyada Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg, liiskuna wuu sii socdaa.
Laakiin waligaa ma isweydiisay sababta aysan magacyada dadka boqortooyooyinka xubnaha ka ah ugu jirin liiska maalqabeennada?
Dalalka ku yaalla Galbeedka Qaaradda Aasiya, sida Kuwait, Sacuudi Carabiya, Qadar iyo Imaaraadka Carabta waa maalqabeenno, boqorro iyo dhaxalsugeyaal badan oo dalalkaas kasoo jeedana waxay ku nool yihiin nolol ka raaxo badan tan ay ku jiraan dadka aan ku aragno liiska taajiriinta Adduunka.
Waxaa hubaal ah in ay iyaga ka taajirsan yihiin Jeff iyo Bill Gates. Haddaba maxay tahay sababta aysan magacyadooda ugu jirin liiska.
Ugu horrey, waxaan eegeynaa qaabka loo diyaariyo liiska.
Wargeysyada arrimaha ganacsiga ee ugu caansan waxaa ka mid ah Forbes, Business Insider iyo Bloomberg. Inkastoo liisaska bogaggan lasoo galiyo ay aad isugu dhow yihiin inta badan waxaa aad loogu kalsoon yahay Forbes.
Qaabkee ayuu u soo xushaa Forbes?
Mid ka mid ah tifaftireyaasha ugh caansan ee ka howl-gala Forbes, oo lagu magacaabo Kerry Dolan, ayaa sharraxday sida ay shaqadaas u qabtaan.
Waxay sheegtay in ay xogtooda ku saleeyaan macluumaad ay ka heleen dadka maalqabeennada ah, maadaama inta badan ganacsatadu ay u imaadaan wadashaqeynna la sameeyaan.
Qaarkood iyaga ayaa toos usoo gudbiya qaarna waxaa lagu helaa dabagal lagu sameeyay dhaqaalahooda.
Forbes waxay leedahay in ka badan 50 wariye oo soo qiimeeya go’aanna ka gaara qiyaasta hantida dadka aan xogtooda soo gudbinin.
Waxaa loo kuur galaa dhaqdhaqaayada hantidooda, iyadoo si joogto ah loo wareysto xubnaha qoysaskooda iyo shaqaalahooda. Waxaa la ogaadaa qandaraas kasta oo ay lacag ku bixiyaan ama kii laga noqdo, hantida ay soo iibsadaan, tan ay iska sii iibiyaan iyo wax walba oo ku saabsan dhaqaale.
Laakiin Forbes mar walba kuma saxna xogta uu soo gudbiyo. Sannadihii uu howshan kusoo jiray wuxuu sameeyay khaladaad dhowr ah, haddana sidaas oo ay tahay waa wargeyska loogu kalsoonida badan yahay wali.
Forbes muxuusan liiska ugu soo darin magacyada Boqrtooyada?
Marka hore, Forbes wuxuu diiradda saaraa shakhsiyaadka ay lacagtooda ka sarreyso $1 bilyan oo doolar.
Laakiin waxaa jira ganacsato badan oo aan lacagta u sameysanin si shakhsi ah. Tusaale ahaan; Mukesh Ambani oo kasoo jeeda qoys maalqabeenno ah.
Haddaba sidan ayey howshu noqoneysaa: Ka warran haddii nin liiska Forbes ku jira oo heysta $10 bilyan oo doolar uu lacagtiisa shan wiil oo uu dhalay ugu kala qeybiyo midkiiba $2 bilyan oo doolar. Magacyada wiilashaas kama soo muuqan doonaan liiska Forbes.
Laakiin haddii mid ka mid ah uu 2-da bilyan ee doolar ganacsi galiyo, kana dhigo $20 bilyan oo doolar, markaas wuu soo galayaa liiska.
Taasi waa sababta inta badan Amiirrada Sacuudiga aysan usoo galin liiska. Waayo inta badan hantidooda waxay ka dhaxleen qoyska.
Qodobka labaad waa in sida lagu ogaado qiyaasta hantida qoysaska boqortooyooyinka Carabta ay tahay mid inta badan aan suurtagal ahayn.
Sanadkii 2017-kii, ganacsadaha u dhashay Sacuudiga ee Al-Waliid Bin Talaal ayaa lagu soo daray liiska Forbes, waxaana lacagta uu heysto lagu sheegay $18 bilyan oo doolar.
Balse markii liiska lasoo daabacay, Al-Waliid wuu hadlay wuxuuna sheegay in hantidiisa laga been sheegay oo ay aad uga sarreyso intaas.
Xilligaas wixii ka dambeeyay, Forbes wuxuu go’aansaday in uusan liiskiisa kusoo darin magacyada xubnaha qoysaska boqortooyooyinka ee dalalka Carabta.
Haddii aan u imaanno qoyska boqortooyada Britain, inta badan hantida aan aragno in boqoradda iyo qoyskeeda ay ku raaxeystaan waa mid laga dhaxlay boqortooyada.
Dahabka iyo qasriyada quruxda badan oo dhan ma aha wax uu qof si shakhsi ah u leeyahay. Qofkii xubin ka ah qoyska boqortooyada unbaa isticmaali kara.
Taasi waa sababta qof ka mid ah boqortooyada UK uusan uga soo muuqanin liiska taajiriinta caalamka ee Forbes.
Tags: Boqortooyo, taajir
U gaar ah dadka khuuriya: Talooyinkan qaado si aad u joojisid
5 Arrimood oo la yaab leh oo ku saabsan Kim Jong-un